Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe.
Vateveri vemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda shanduko mumatambiro echikwata chavo chemaWarriors apo chiri kupinda munhandare neSomalia mangwana mumutambo we 2022 World Cup mushure mekushoresa zita renyika kwenguva refu.
Izvi zvakapa Somalia kukunda kwayo kwekutanga mumitambo makumi matatu nemumwechete, mushure mekurohwa mumitambo gumi neminomwe nekuita mangange mumitambo gumi nemitatu kubvira muna 1984 apo Somalia yacho yakatanga kutamba nedzimwe nyika.
Izvi hazvisi kufadza vateveri vechikwata ichi kusanganisira VaOliver Musongoro avo vanoti maWarriors anofanira kusandura maitiro avo apo vari kusanganana zvekare neSomalia asi iko zvino kwete kuDjibouti asi muNational Sports Stadium muHarare.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa kuBarbourfieds Stadium kuBulawayo neSvondo asi ukazoiswa muNational Sports Stadium neChipiri zvichitevera chikumbiro cheSomalia kuti yaive isingakwanise kusvika muZimbawe paine nguva nemhaka yemafambiro edzindege.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaWilliam Mahoko, vanoti vari kutya kuti maWarriors angangorohwa zvekare sezvo vasisina chivimbo nechikwata ichi kubvira pachakadzoka kubva kumafainari e 2019 Africa Cup of Nations.
Asi muteveri wechikwata cheHarare City, VaMarcabee Makamure, vanoti havasi kuona Zimbabwe ichinetseka kurova Somalia vachiti ivo maWarriors achakanda zvibodzwa zvitatu.
Mumwe muteveri wemaWarriors, Muzvare Tendekai Musabayana, vanoti semaonero avo maWarriors ari kurakasha Somalia nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Murairidzi wemaWarriors, Joey Antipas, ashevedza mutambi Ovidy Karuru kuwedzera pavatambi vaakaenda navo kuDjibouti aine tarisiro yekuti Karuru achakwanisa kusandura mafambiro ezvinhu.
Zimbabwe ikakunda mumutambo uyu inobudirira kupinda munguwani yemubatanidzwa wemagungano ezvikwata zvicharwira nzvimbo shanu dzekumirira Africa kuma 2022 World Cup ayo achaitirwa kuQatar.
Zimbabwe haina kukwanisa kutamba mumakundano e 2018 World Cup mushure mekudzingwa mumakwikwi aya neFifa mushure mekunge Zifa yatadza kubhadhara aimbove murairidzi wemaWarriors, Valinhos, uyo akaendesa nyaya yake kusangano rinotungamira nhabvu pasi rese iri.
Zvichadaro, chikwata cheFC Platinum chadzokera pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Herentals 2-0 mumutambo waifanira kuve wakatambwa kare asi ukambomiswa nekuti FC Platinum yaitamba mumakwikwi eCaf Champions League.
Izvi zvapinza Platinum mumapoinzi makumi matatu nemapfumbamwe, yakaenzana mapoinzi neZPC Kariba asi ma “Pure Platinum Boys” aenda pamusoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa.
Asi Black Rhinos, iyo yakarova Triangle 2-1 mumutambo waive wasarirawo zvekare, yaramba iri pachinzvimbo chechisanhu pasi pe FC Platinum, ZPC Kariba, Chicken Inn neCaps United.
Chicken Inn ne Caps United dzine mapoinzi makumi matatu nemasere.
Rhinos yakasiiwa nemapoinzi maviri chete neFC Platinum.